बाढीपहिरोले सात जिल्लाका १४ सडक पूर्ण अवरुद्ध? – Hamro24News
July 18, 2021 adminLeaveaComment on बाढीपहिरोले सात जिल्लाका १४ सडक पूर्ण अवरुद्ध?
काठमाडौं, साउन ३ । बाढीपहिरोका कारण मुलुकभरका विभिन्न राजमार्ग तथा सडकका साथसाथै पुलहरूमा पनि क्षति हुने क्रम जारी रहेको छ । जेठ अन्तिमदेखि हालसम्म मुलुकभर १२५ स्थानका सडकमा क्षति पुगेको छ । तीमध्ये १४ जिल्लाका सडक खण्डहरू पूर्णरूपमा अवरुद्ध छन् ।
सडक विभागका अनुसार बाढीपहिरोका कारण मनाङ, पर्वत, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, रसुवा, तनहुँ र पाल्पा जिल्लाका विभिन्न १४ स्थानमा सडक पूर्ण अवरुद्ध छन् । तीमध्ये मनाङ जिल्लाका सडकहरू धेरै ठाउँमा अवरुद्ध छन् । विभागले नियमित रूपमा पहिरो झर्ने र भौगोलिक अवस्था जटिल भएकाले वर्षा नरोकिँदासम्म मनाङका सडकहरू सञ्चालनमा असहज भएको जानकारी दिएको छ ।
पुष्पलाल राजमार्गको पर्वत जिल्लाको सहस्रधारा र अरनिको राजमार्गको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको लिपिङमा सडक अवरुद्ध भएको छ । डुम्रे–बेशींशहर–चामे सडकको मनाङ, लमजुङ जिल्लाका सडक खण्डहरू पनि अवरुद्ध छन् । असार १ गतेदेखि मनाङका तिमाङ खोला, धारपानी, बगरछाप लमजुङको रामबजार, अर्खले, च्याम्चे स्थानका सडक खण्ड १ महीनादेखि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रहेको विभागको तथ्यांक छ**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
पहिरोले दुई जेसीबी र एक ट्याक्टर पुरियो : एक जनाको मृ’त्यु ?
के हुँदै छ नेपालमा ? फेरी घट्यो सारा देशबासीहरुलाई रूवाउने घटना
फेरि पनि छुनै नसकिने गरि बढ्यो टमाटरको मुल्य ! कति पुग्यो ? पूरा हेर्नुहोस –